Faah faahin:- Madaafiic lagu weeraray saldhig ay ku sugan yihiin ciidanka Jabuuti ee magaalada B/weyne – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Madaafiic lagu weeraray saldhig ay ku sugan yihiin ciidanka Jabuuti ee magaalada B/weyne
Dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe dhowr madaafiic ku weerartay saldhig ay ciidanka Jabuuti ku leeyihiin xaafadda H/wadaag oo ku yaala galbeedka magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Ilaa 7 madfac ayaa la sheegay inay dagaalyahanadda Al-shabaab ku tuureen saldhiga ay ciidanka Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM kaga sugan yihiin magaalada B/weyne, inkastoo ilaa iyo haatan aan si rasmi ah loo ogeyn qasaaraha ka dhashay.
Ciidamada Jabuuti ee AMISOM ayaa dhinacooda jawaab culus ka bixiyay madaafiicdaasi lagu soo garaacay saldhigooda, waxayna madaafiic kale ku rideen goobtii looga soo riday madaafiicdaasi, taasoo xaalad kacsanaan ah magaalada gelisay.
Ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay madaafiicdaasi, iyadoona saraakiisha ciidanka AMISOM aysan weli wax faah-faahin dheeraad ah ka bixin qasaaraha ka dhashay madaafiicda xalay lagu soo weeraray xarunta ay ku sugan yihiin ciidankooda.
Dhinaca kale, ciidanka Jabuuti ee AMISOM iyo kuwa maamulka gobolka Hiiraan ayaa saakay waxay howlgalo culus ka bilaabeen xaafadaha ku yaala magaalada B/weyne, waxaana howlgaladaasi lagu baadi-goobayaa kooxihii ka dambeeyey weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga askarta Jabuuti ay ku leeyihiin magaaladaas.